Tetiandro gregôriana - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Kalandrie gregoriana)
Ny tetiandro gregôriana na kalandrie gregôriana dia tetiandro manara-masoandro noforonina tamin'ny faraparan'ny taonjato faha-16 izay natao mba hanitsiana ny fahadisoan'ny tetiandro joliana nampiasaina tamin'izay. Ny Papa Gregôrio XIII no nampanao azy ka i Christophorus Clavius (manam-pahaizana zezoita alemàna sy matematisiana ary mpahay kintana) no nanomana ny fototry ny tetiandro vaovao nanomboka tamin'ny taona 1579. Noraisin'i Gregôrio XIII izany tetiandro izany tamin'ny taratasin'ny Papa atao hoe "Inter gravissimas" tamin'ny 24 Febroary 1582.
I Christophorus Clavius
Natao indrindra io tetiandro io mba hanarenana ny fahadisoan'ny tetiandro joliana izay efa tsy nampifanandrify intsony ny fizaran-taona tamin'ny tonon'andro tena izy ka nahitana fahadisoana 10 andro vokatry ny taona manara-masoandro (taona trôpika) izay tsy mahafeno 365,25 andro fa latsaka kely noho izany. Ao amin'ny tetiadro joliana dia mihoatra 11 mn sy 14 s noho ny taona manara-masoandro ny iray taona. Nitambatambatra izany elanelana izany ka tamin'ny taona 1582 dia nisy fihoarana 10 andro ny daty ao amin'ny tetiandro joliana raha miohatra amin'ny tokony ho daty marina tamin'izany araka ny masoandro sy ny fizaran-taona. Nanapaka i Gregôrio fa foanana ny 10 andro amin'izany tetiandro izany. Nampiasaina ilay tetiandro tamin'ireo Fanjakana katolika tamin'ny 15 Oktobra 1582 ka izany andro izany dia lasa niova ho 4 Oktobra 1582.
Ny Papa Gregôrio XIII
Ny taona lava dia nesorina isaky ny tsingerin-taonjato afa-tsy ireo izay mifanandrify amin'ny anarivon-taona azo zaraina 400. Ny taona 1600 dia taona lava fa ny taona 1700 sy 1800 kosa dia taona tsotra.
Niely tsikelikely tamin'ny firenena protestanta koa izany sy tamin'ny ankamaroan'ny firenena eto an-tany hatramin'ny taonjato faha-20. Misy tetiandro hafa koa anefa ampiasaina amin'ny fivavahana na ara-pomban-drazana. Tamin'ny taona 1752 no nandraisan'i Britaina Lehibe an'ilay tetiandro ka ny voalohan'ny volana Janoary no nataony andro voalohany amin'ny taona. Tamin'ny taona 1918 vao nandray an'io tetiandro io i Rosia. I Grisia kosa tamin'ny taona 1923 nefa tsy navelany ny tetiandro joliana, indrindra fa ao amin'ny Fiangonana any aminy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetiandro_gregôriana&oldid=1010398"
Dernière modification le 28 Martsa 2021, à 09:36
Voaova farany tamin'ny 28 Martsa 2021 amin'ny 09:36 ity pejy ity.